कोरोना संक्रमित नर्सहरुलाई जनकपुरको डाक्टर सिंहले दिए धम्की ? | अपन जनकपुर
कोरोना संक्रमित नर्सहरुलाई जनकपुरको डाक्टर सिंहले दिए धम्की ?
विपिन कुमार यादव / जनकपुरधाम : प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरकी कोरोना संक्रमित नर्सहरुको विचल्ली भएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि झन मनोबल उच्च पार्नुको सट्टा अस्पतालका डा. जामुन सिंहले लाइसेन्स खारेज गरिदिने धम्की दिएपछि उनीहरु तनाबमा परेकी हुन् ।
सोमवार कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि अस्पतालका दुई डाक्टर र सात नर्ससहित १८ जनालाई डा. सिंहले दबाब दिएर नर्सिङ कलेजको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ । तर उनीहरु उक्त आइसोलसन अव्यवस्थित रहेको भन्दै बस्न अस्वीकार गरेका छन् । व्यवस्थित आइसोलेसनमा राख्न उनीहरुको माग छ ।
अहिले राखिएको आइसोलसन सफा छैन । झ्याल समेत खुल्दैन । विजुली नरहेका बेला आइसोलेसन कक्षमा सास फेर्न पनि गाहे भइरहेको नर्सहरुहरुको भनाई छ । साथै लक्षण देखिएका अन्य संक्रमितसँगै राख्दा झन समस्यामा पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।